ကလေးငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်အလွန်ကြီးတဲ့ ကြယ်သီးဓါတ်ခဲ ခေါ် လီသီယမ်ဓါတ်ခဲ – Cele Club
အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Basingstoke မှ အသက် ၂ နှစ်အရွယ် Francesca Asan ဟာ အံဆွဲကိုဖွင့်ပြီး အဖေသေချာသိမ်းထားတဲ့ကြယ်သီးဓါတ်ခဲ ခေါ် လီသီယမ်ဓါတ်ခဲကိုမြိုချခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်ကို အိမ်သားများလုံးဝမသိခဲ့ကြဘူး။
ကလေးဟာ ရက်အနည်းငယ်အတွင်းနေမကောင်းဖြစ်နေတာ ၃ ကြိမ်ရှိနေပြီ။ ဒါကြောင့် GP ဆေးခန်းသွားပြတော့ ဆရာဝန်က ကြမ်းပိုးကိုက်သလား အစာအဆိပ်သင့်သလား တစ်ခုခုပဲ အခြေအနေမကောင်းရင်ပြန်လာပါလို့ဆိုတယ်။
ကလေးဟာ အစာစားဖို့ငြင်းဆန်နေသလိုချေးမည်းများလည်းသွားတယ်။ ပါးစပ်ကိုလည်း လက်ညှိုးညွှန်ပြပြီးနာကြင်ကြောင်းပြောတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘများက သွားဆေးခန်းခေါ်သွားပြန်တယ်။ သွားဆေးခန်းမှာ နာကြင်ကြောင်းဆိုပြန်လို့ သွားနဲ့ခံတွင်းမှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေတာလို့ဆိုတယ်။
သွားဆေးခန်းမှအပြန်ကလေးဟာအဖေ့လက်ထဲမှာပဲ ပျော့ခွေကျပြီးေ ချးများလည်းထွက်ကျလာလို့ ဆေးရုံကိုအမြန်ခေါ်သွားကြတယ်။ ဆရာဝန်များ ကလေးရဲ့ပါးစပ်ထဲပိုက်ထည့်လိုက်တာေ သွးပုပ်များထွက်ကျလာတယ်။ သိပ်မကြာခင်မှာပဲ ချစ်တဲ့မိဘများကိုစွန့်ခွါသွားပါတော့တယ်။
သေဆုံးပြီး ရင်ခွဲစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ကိုယ်တွင်းအနှံ့ နဲ့ အစာအိမ်ထဲမှာေ သွးခဲတွေပိတ်နေတာတွေ့ရတယ်။ အစာပြွန်ထဲမှာတော့ ပျက်စီးပေါက်ထွက်နေတဲ့ ၂ စင်တီမီတာအရွယ် ၃ ဗို့ လီသီယမ်ဘက်ထရီတစ်လုံးတွေ့ရတယ်။
ဘက်ထရီဟာ ပေါက်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ သွေးကြောမှတဆင့်ပြန့်နှံ့သွားကာ ကိုယ်တွင်းနေရာစုံမှာသွေးခဲတွေပိတ်ကုန်တာလို့ဆိုတယ်။
It was only one week after the incident when the little girl went ‘floppy’ in her father’s arms that she was rushed to hospital and doctors discoveredathree- volt lithium battery had eroded through her oesophagus into her artery.
London’s Great Ormond Street Hospital urged parents to avoid using button battery because as they are like ‘poison’ to children.
They are immediately attractive objects to babies who are likely to pick them up and put them on their mouth.
We need to be aware of these things and be aware of the button batteries and the dangers they bring.
ကြယ်သီးဓါတ်ခဲ သို့မဟုတ် လီသီယမ်ဓါတ်ခဲကို ကလေးရှိတဲ့အိမ်တိုင်းမှာ မရှိအောင် မထားတာအကောင်းဆုံးပါ။
ဒီဓါတ်ခဲဟာ ကလေးတွေကိုအမြင်အားဖြင့်ဆွဲဆောင်ပြီးကောက်ယူကာ ပါးစပ်ထဲထည့်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်။